Java run ဖို့software လေးတွေလိုချင်ပါတယ် - MYSTERY ZILLION
Java run ဖို့software လေးတွေလိုချင်ပါတယ်
March 2010 edited March 2010 in Java
ကျနော်ရေးထားသော Java softwares သေးသေးလေးတွေကို Testing နေနဲ ့စမ်းသပ်ချင်လို ့ပါ
ဘယ်လို softwares များသုံးရမလဲ မသိဘူး?
ဘယ်လိုစမ်းမယ်ဆိုတာတော့ မရှင်းတာတော့ အမှန်ပဲဗျ . ဒါပေမယ့် သေချာတာတော့ စက်ထဲမှာ java run time တော့ ထည့်ထားဖို့တော့လိုမယ်ဗျ. ဒါမှ command ထဲကနေလဲ java program ကို run လို့ရမယ်.
ဟုတ်ကဲ့ညီအကိုနှစ်ယောက်လုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်
online speed ကောင်းတုန်းလေး မြန်မြန် Type ပြီးတင်လိုက်ရလို ့ပါ
ကျနော် အခုမှ စပြီး Java လေ့လာတာပါ
Coding တွေကို လက်နဲ့ဘဲချရေးပါတယ်
အဲ ့ဒီ Coding တွေကို ဘယ် Software မှာ Type ပြီး Test နေနဲ့run လို ့ရမလဲ ဆိုတာသိ ချင် လို ့
ဥပမာ calculator sofware ကို .exe ဖြစ်ခင် coding လေးနဲ ့ဘဲ အရင် run ချင်တာပါ
Java program တွေကို coding ရေးပြီး Run ချင်ရင် JCreator တို့ Ecllipse တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် :P
CDMA 450Hz Haier 2010 ဖုန္း firmeware လိုခ်င္လို ့ပါ
ကျနော် java runtime လိုချင်ပါတယ် .jar fileကို run ချင်လို့ပါ